कोरोनाले मृत्यु हुनेमा निरोगी युवा पनि – Bikash Khabar
बिहिबार, १६ बैशाख २०७८ गते ६:५३ मा प्रकाशित	Author विकास खबर संवाददाता	Comment(0)	230 Views
काठमाडौं,१६ वैशाख। नेपालमा बितेको वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमणले वृद्ध र दीर्घरोगीलाई बढी सकस पारेको थियो। बढी मृत्यु पनि यही समूहका मानिसको भएको थियो। तर अहिलेको लहरमा भने निरोगी युवालाई समेत धेरै असर पारेको छ। युवाको समेत मृत्युदर बढिरहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले औंल्याएका छन्।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा केही दिनयता मृत्यु भएका दुई युवा ३३ र ३८ वर्षका छन्। त्यस्तै ४९ वर्षका एक व्यक्तिको पनि मृत्यु भयो । उनीहरू तीनै जना निमोनिया भइसकेपछि मात्र अस्पताल पुगेका थिए। उनीहरूको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ । उनीहरूमा कुनै पनि दीर्घकालीन रोग नभएको उपचारमा संलग्न डा. अनुप बास्तोलाले बताए।
ह्याम्स अस्पतालमा केही दिनयता मृत्यु भएका दुईजनामध्ये एक कुनै रोग नभएका युवा छन्। उनीहरूको कोरोना निमोनियाले मृत्यु भएको अस्पतालका कोभिड उपचार चिकित्सक डा. राजु पंगेनीले नागरिकलाई जानकारी दिए। अहिले वार्डमा सिकिस्त भएर भर्ना भएका मध्ये ३५ देखि ५० वर्षभित्रका धेरै रहेको डा. पंगेनीले बताए।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कोभिड उपचार चिकित्सक डा. सविन थपलियाका अनुसार भर्ना भएका १ सय ३० जना कोरोना संक्रमित बिरामीमध्ये ९० प्रतिशतको अवस्था गम्भीर छ। तीमध्ये पनि धेरै आइसियु चाहिने अवस्थामा छन्। सिकिस्त भएर उपचारमा पुग्नेमा निमोनिया भइसकेका युवा पनि छन्।
यो वर्षको भाइरसको स्वरुप कडा भएकाले निरोगी युवालाई समेत सिकिस्त बनाएको डा. बास्तोला बताउँछन्। कोरोनालाई सामान्य रुघाखोकीका रुपमा हेरेर चरम बेवास्ता गर्नाले पनि युवाहरू सिकिस्त बनेको उनको तर्क छ। ‘सुरुमा सामान्य रुघाखोकी, ज्वरो ठानेर घरैमा बस्छन् । धेरै दिनसम्म निको नभएपछि मात्र अस्पताल आइपुग्छन्। त्यति बेला कोरोनाले फोक्सोमा निमोनिया बनिसकेको हुन्छ’, उनले भने । निमोनिया र फोक्सोको संक्रमण बढी भइसकेपछि अस्पताल आइपुग्दा निको हुन नसकी युवाहरूको मृत्यु हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
ह्याम्स अस्पतालका डा. पंगेनीका अनुसार दोस्रो लहरको संक्रमणमा बढी बालबालिका र युवा परेका छन्। त्यसमा पनि युवा हेलचक्र्याइँ गरेर सभासम्मेलन, जमघटमा जाने गरेकाले उनीहरू बढी संक्रमित भएको र वृद्धले खोप लगाएकाले कम संक्रमित भएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ।
चिकित्सकका अनुसार ज्वरो आउने, खोकी लाग्नेजस्ता लक्षण देखिएमा समयमै अस्पताल पुगेमा युवालाई बचाउन सकिन्छ । ‘अक्सिजन घट्दै गएको निगरानी स्थानीय निकायले गर्नुपर्छ । ९४ भन्दा कम भएमा संक्रमितलाई अस्पताल पठाइहाल्ने व्यवस्था स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ’, उनको सुझाव छ । घरमै सम्भव भएमा ज्वरो र अक्सिजन नाप्ने र कम हुँदै गएमा अस्पताल गइहाल्नुपर्ने उनले बताए। नागरिक दैनिकबाट साभार
१८ भदौ,काठमाडौँ । प्रदेश नं २ को प्रदेश सभामा नेकपा एमाले विभाजित हुँदा नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा बहुमत देखिएको
काठमाडौँ, ०२ असार। पश्चिमी सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलामा आएको भिषण बाढी पहिरोले तल्लो तटीय क्षेत्रमा व्यापक जनधनको क्षति पुर्‍याएको छ ।